ဘူးသီးတောငျ နောကျခံ၊ nld ကိုရဲသိနျး နဲ့ အဝေးမွငျ အနီးမွငျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 28, 2019 December 28, 2019 web_master
ဘူးသီးတောငျ နောကျခံ၊ nld ကိုရဲသိနျး နဲ့ အဝေးမွငျ အနီးမွငျ
ဘူးသီးတောင် နောက်ခံ၊ nld ကိုရဲသိန်း နဲ့ အဝေးမြင် အနီးမြင်
ပူးတွဲပါ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ ဘူးသီးတောင်မြို့ကနေ မိုင် (၂၀) မျှသာဝေးတဲ့ စည်တောင်ကျေးရွာက မိသားစုတစ်စု ဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ရွာကို ၀ိုင်းထားတဲ့အတွက် မိမိတို့အိမ်ဝင်း မြေကျင်းမှာ ပုန်းအောင်နေခဲ့ရာမှာ တွင်းထဲအထိလာပစ်လို့ သေခဲ့ကြရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်ဆိုတဲ့ မြို့ငယ်ကလေးက nld ပါတီဝင် ကိုဘူနောင် ခေါ် ကိုရဲသိန်း ကို အေအေက ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်ရဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိခိုက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ် လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က အေအေ ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မဘက်က ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေ အမြင်ကွဲပြားမှုတွေ ရှိလာခဲ့ကြတယ်။
ICJ ကိုသွားမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပွဲလုပ်မယ့် ကိုရဲသိန်းကို အေအေက ဖမ်းဆီးတယ် ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသဘောထားအရဆိုရင် ကိုရဲသိန်းအပေါ် ကျွန်တော် ဂရုဏာသက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပတ်ပတ်လည်က မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းက ဘာမှ သဘောထားမှတ်ချက်မပေးကြဘူး၊ ကျန် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းက ဟာ . . . မိတ်ဆွေကလဲ အဲဒီလူက ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လို့ ပျစ်ပျစ်နစ်နစ် ပြောကြဆိုကြတာကို စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ ကြားရပါတယ်။
ကိုဘူနောင် (ခေါ်) ကိုရဲသိန်း ကိစ္စမှာ ဗမာပြည်မဘက်ကလူတွေ စဉ်းစားပုံ ၀င်ပြောကြပုံ နဲ့ ရခိုင်ဘက်ကလူတွေ စဉ်းစားပုံ ဘာကြောင့်/ဘယ်လို ကွဲပြားခြားနားကြသလဲ ဆိုတာကို သက်ရောက်ဖွယ်ရှိတဲ့ “နောက်ခံအကြောင်းအရာ” အချို့ကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ဘာစကားကိုမှ မပြောခင် ကနဦးပြောလိုတာကတော့ ကိုရဲသိန်းကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ သူ့မိသားစုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
(တစ်) ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဦးရေ နှစ်သောင်းဝန်းကျင်မျှသာ ရှိနိုင်တဲ့ ယနေ့ခေတ် ဘူးသီးတောင်မြို့ငယ်ကလေးမှာ တစ်ဦးတည်းသော “မြင်သာနိုင်သော” မြို့ပေါ် nld ပါတီဝင်ဟာ ကိုရဲသိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မြို့လုံးမှာမှ nld ပါတီဝင် တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်လို့ ပြောမယ် ဆိုရင်လည်း မှားနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုရဲသိန်းဟာ မြို့ပေါ်မှာ nld နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပွဲလေးဘာလေးလုပ်စရာရှိရင် နယ်ဘက်က မသိနားမလည်တဲ့ မြို့ပေါ်မှာ ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ မြို၊ ခမီး၊ ဒိုင်းနက်တွေကို လှမ်းခေါ်၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံတွေ ၀တ်စေပြီး အခမ်းအနားတွေလုပ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံပွဲတွေ လုပ်ပါတယ်။ မြို့ပေါ်ကလူတွေကတော့ ဘာမှမပြောဘဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။
(နှစ်) nld ပွဲတွေမှာ လာလာ လူဖြည့်ပေးကြတဲ့ နယ်ဘက်က မြို၊ ခမီး၊ ဒိုင်းနက် တွေကို ဘာမှ အပြစ်တင်ဖွယ်ရာမရှိပါ။ ခမီးအနည်းငယ်ကလွဲလို့ သူတို့ဟာ နိုင်ငံရေးဆိုတာကို ကကြီး ခခွေး အဆင့်တောင်မှ နားမလည်နိုင်ကြပါ။ usdp ကိုထောက်ခံကြရမယ့် ကာလရောက်ရင် usdp ကို ထောက်ခံကြရပါတယ်။ နားလည်သလောက်နဲ့ nld အားပေးကြရမယ် ဆိုရင်လည်း အားပေးလိုက်ကြရတာပါပဲ။ နှစ်ဆယ်အိမ်စုကလေးတွေအားဖြင့် ပြန့်ကြဲနေထိုင်ကြတဲ့ ဒီရခိုင်မျိုးနွယ်စုငယ်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်လုံးလုံး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ngo တွေရဲ့ စနစ်တကျ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေခံခဲ့ကြရတယ်။ ဘေးနားက အိမ်ခြေထောင်ချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီရွာကြီးတွေကို စားရေရိက္ခာမျိုးစုံ မပြတ်မလပ်စေရအောင် နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် ထောက်ပံ့နေခဲ့ကြစဉ်မှာ – ‘ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တွေ ထိရောက်မှုရှိအောင် အိမ်ခြေငါးဆယ်အောက် ရွာသိမ်တွေကို ထောက်ပံ့ရေး ပရိုဂရမ်ထဲမှာ မထည့်ဘူး’ ဆိုပြီး ပရိုဂရမ်ဆွဲထား ဆောင်ရွက်လိုက်ရုံမျှနဲ့ ပြန့်ကြဲတည်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာသေးသေးလေးတွေဟာ အလိုလိုချန်လှပ်ခံရပြီး ဆက်လက်ငတ်မွတ်ကြုံလှီလာခဲ့စဉ်မှာ ဘေးနားက ဘင်္ဂါလီရွာတွေ အားကောင်းသထက်ကောင်းလာခဲ့တယ်။ နောက်ဆက်တွဲ စီးပွားရေး လူမှုရေးသက်ရောက်မှုတွေများစွာ ရှိလာခဲ့တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေဆီမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရတာများသထက်များလာတယ်။ တိုင်းရင်းသူလေးတွေ ဖားရှာ ငါးရှာ မျှစ်ရှာသွားစဉ် ဘင်္ဂါလီတွေဆီမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံရရင် တိုင်ကြားဝံ့ဖို့တောင် မနည်းသတ္တိမွေးရတယ်။ ဒီလိုနောက်ခံမှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးနွယ်စုငယ်တွေဟာ usdp က အာဏာရှိတယ် လို့ ယူဆတဲ့ အချိန်မှာ usdp ကို မဲပေးပါဆိုရင် မဲပေးလိုက်ကြတာပဲ၊ nld က အာဏာရှိတယ်လို့ သိရတဲ့အချိန်မှာ မြို့ပေါ်မှာ nld ထောက်ခံပွဲ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သွား ထောက်ခံပေးကြရတာပဲ။ သူတို့အတွက် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် ဘင်္ဂါလီပင်လယ်ကြောမှာ မျောပါနေရတဲ့ သူတို့အဖို့ ပြည်မ မင်းအစိုးရရဲ့ တိုက်ရိုက် လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ဟာ သူတို့အဖို့ အသက်ကယ်ကြိုးမျှင် (life line) ဖြစ်တယ် ချိတ်ဆက်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သူတို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။
(သုံး) ဘူးသီးတောင်မြို့ကလေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ်ကျော်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ အဲသည်အဖြစ်အပျက်ဟာ ယနေ့အထိ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ဘင်္ဂါလီ သုံးပွင့်ဆိုင် ထိတွေ့မှုမှာ ရခိုင်တွေဘက်က အမြဲ စွဲမှတ်ယူထားကြတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေတယ်။ အဲသည်အဖြစ်အပျက်က ဘာလဲဆိုတော့ . . . ၁၉၄၂-ခုနှစ်မှာ ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်နဲ့ ဘူးသီးတောင်နယ်တစ်ခွင်လုံးမှာ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မကျန်အောင် ဘင်္ဂါလီတွေလက်ချက်နဲ့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် အဖြစ်ဆိုးမှာ အရေးပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ကတော့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ရန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ရန်အောင် ဦးဆောင်တဲ့ ဘီအိုင်အေတပ်တွေ စစ်တွေကနေ ဘူးသီးတောင်ကို တက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘူးသီးတောင်မြို့ဟာ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နယ်လုံးက ထွက်ပြေးလာရသူတွေ ဟာ ရသေ့တောင်ကို ထွက်ပြေးဖို့ လက်လှမ်းမမီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဟာ ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ လာခိုကြရတယ်။ နယ်မြေခံပုလိပ် လက်တစ်ဆုပ်စာ၊ ဗားမားဘော်လံတီယာ တပ်ဖွဲ့ဝင် အနည်းငယ်၊ ကရင်တပ်သားအနည်းငယ်၊ ရခိုင်လူငယ်များ နဲ့ ခုခံနေလို့ ဘူးသီးတောင်မြို့ အသက်ရှင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ ဗိုလ်ရန်အောင်တပ်ရောက်လာတယ်။ မြို့ကိုခုခံနေသူများဆီမှာ ရှိတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ တကွ လက်နက်တွေအကုန်လုံးကို ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဗိုလ်ရန်အောင်တပ်က သိမ်းတယ်။ လက်နက်သိမ်းပြီး ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာ ဗိုလ်ရန်အောင်တပ်ဟာ ဘာအကြောင်းကြောင့် ရယ်မှန်းမသိ ဘူးသီးတောင်ကနေ ဆုတ်ခွာပြီး စစ်တွေကို မပြောမဆို တပ်ရုပ်ပြီးပြန်တယ်။ လက်နက်မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့လူထုဟာ ဗိုလ်ရန်အောင် ဆုတ်တဲ့နေ့မှာပဲ ဘင်္ဂါလီတွေလက်ချက်နဲ့ အကုန်လုံး ခွေးသေ၀က်သေ သေတယ်။ တစ်ယောက်မှ မကျန်ဘူး။
(လေး) “ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ရက်စက်မှု”၊ “ပြည်မသားများရဲ့လိမ်ညာမှု”၊ “ရခိုင်များအဖို့ ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်နက်ကမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှု” ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာသုံးရပ်ကို အဲသည် ၁၉၄၂-ခုနှစ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခံရမှုက ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာ တပေါင်းတစည်းတည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲမှတ်ကျန်ရစ်စေခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့က မန်အောင်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတဲ့စကားဟာ ဒီ ၁၉၄၂ ဘူးသီးတောင်ဖြစ်ရပ်ကို သိနေသူများအဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားမှာ အသေအချာ မှတ်သားထားတဲ့ သင်ခန်းစာများရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ “လက်နက်အင်အားနဲ့ အပြောင်း အလဲလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ (ကို ကျွန်မအရင်ကပြောဖူးပါတယ်။) ဉာဏ်ပညာအမြော်အမြင် နည်းလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတ္တိနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ စေတနာ နည်းလို့ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားကိုကြားရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သင့်တာက ငါတို့ အလိမ်အညာမမိဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
(ငါး) ဘူးသီးတောင်အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာ ဒီနှစ် လက်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာတွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုတွေ နဲ့ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်း (IHL) ဖောက်ဖျက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ဖွယ်ရာရှိတယ်လို့ အများက ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များက ပေါ်လွင်နေပေမယ့် မြန်မာ့တပ်မတော်က ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဗြောင်ငြင်းနေတာဟာ လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းအစွပ်မခံလိုတဲ့ သဘောမျှသာဖြစ်ဖွယ်ရာရှိတယ် လို့နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဥပဒေပြင်ပ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရာဂဏန်းဝန်းကျင် ရှိပါပြီ။ မြောက်ဦးမြို့နယ် လက္ကာကျေးရွာသားများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေချိန်မှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီး သေသွားရတာ၊ ဘာကြောင့်သေတာလဲ ဆိုတာကို ဆေးစာမပြနိုင်တာ၊ မိသားစုက အလောင်းတောင် မတွေ့လိုက်ရတာ။ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကျောက်တန်းရွာသား ခုနစ်ဦးဟာ ပစ်သတ်ခံရပြီးတဲ့အခါကျမှ သေနတ်လုလို့ပါလို့ ပြောတာ။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စည်တောင်ကျေးရွာက မိသားစုတစ်စုလုံးဟာ ပုန်းအောင်းနေရာမြေကျင်းအထိ လာရောက်ပစ်သတ်ခြင်းခံရတာ . . . ၊ စသည်အားဖြင့် အဖြစ်အပျက်ပေါင်း များမြောင်လှပါတယ်။ ၂၀၁၉ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ညနေကိုးနာရီခွဲလောက်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က စည်တောင်ကျေးရွာကို ၀ိုင်းထားခဲ့တယ် လို့ ဆိုတယ်​။ (၂၂) ရက်နေ့ မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါ မြေကျင်းတူးပြီးဗုံးခိုနေတဲ့ မိသားစုတစ်စုဟာ အကုန်လုံး ဗုံးကျင်းထဲမှာ သေနေကြပါပြီ။ အဲသည်ညမှာပဲ အသက်ကြီးရင့်တဲ့ တုန်တုန်ရိရိ အဖွားအိုတစ်ယောက်ကိုလည်း ရွာထဲမှာ ပစ်သတ်ခဲ့ကြသေးတယ်။
(ခြောက်) နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကိုရဲသိန်းနေထိုင်ရာ ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်က လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တကွ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့ ကြက်ခြေနီအလံကို လွှင့်ထူပြီး စည်တောင်ရွာကို လိုက်သွားကြပါတယ်။ လိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့ ရောက်သွားသည်အထိ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေဟာ ရွာကို ၀ိုင်းပြီး ပစ်နေကြတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမတ် နဲ့ ကြက်ခြေနီအလံကို မြင်လို့ အသာလေးနောက်ဆုတ်သွားကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
(ခုနစ်) စည်တောင်မှာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေ ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အပါအ၀င် ရွာသားတွေအကုန်လုံး ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ်ကို ပြောင်းရွေ့ခိုလှုံကြရပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့သူတွေအတွက် ဘူးသီးတောင်တစ်မြို့လုံး ပူဆွေးသောကရောက်ကြရပါတယ်။ ပူဆွေးခဲ့ကြသူတွေထဲမှာ ကိုရဲသိန်းတော့ ပါမယ်မထင်ပါဘူး။ အဲသည်အချိန်ကတည်းက မြန်မာတပ်မတော်ကို ICC မှာ တိုင်တမ်းဖို့ အချက်အလက်တွေ စုစည်းဖို့သင့်တယ် လို့ ပြောကြဆိုကြတာတွေ များသထက်များလာပါတယ်။
(ရှစ်) ရခိုင်က နာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်အချို့ ရဲ့နောက်မှာ လူညံ့လူဖျင်း လူလိမ်လူကောက်အချို့ လာလာ နေရာယူကြတာကို တွေ့ရသလို nld ရဲ့ ထီးရိပ်အောက်မှာ အမှိုက်သရိုက်တွေ အများအပြားရှိနေနိုင်ပါတယ်။
စစ်ထောက်လှမ်းတွေ တန်ခိုးထွားစဉ်ကာလမှာ ဦးရဲသိန်း (ခေါ်) ကိုဘူနောင်ဟာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အချို့နဲ့ ပေါင်းဖက်ပြီး ဘူးသီးတောင်မြို့ ကြက်ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ စုံစမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲသည်ခေတ်တုန်းက နယ်မြေတစ်ခုခုမှာ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမယ်တစ်ခုကို တစ်ဦးတည်းပိုင် ၀ယ်ယူရောင်းချခွင့်ကို “ကိုယ်စားလှယ်” လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲသလို “ကိုယ်စားလှယ်” monopoly လုပ်ခွင့်ကို ထောက်လှမ်းရေးတွေဆီက ရတဲ့သူတွေဟာ ကြိုက်ဈေးချဝယ် ကြိုက်ဈေးတင်ရောင်းနဲ့ အင်မတန် အလုပ်ဖြစ်လှပါတယ်။ အဲသလိုလုပ်စားဖို့ကို ဘင်္ဂါလီတွေက စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို သင်ပေးကြတာဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီက ရှေ့မထွက်ချင်ရင် ရခိုင်တစ်ယောက်ယောက်ကို နာမည်ခံခိုင်းထားတတ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ သံတွဲတို့အထိမရောက်ပေမယ့် ဘူးသီးတောင် မောင်တောကနေ စစ်တွေအထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဖမ်းမခံရခင်တစ်ရက်က ကိုဘူနောင်ဟာ စစ်တွေမြို့ကို ရောက်လာခဲ့သေးတယ် လို့ သိရတယ်။ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းလုပ်လိုသူ တစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေကို သူ့ရဲ့ nld အဆက်အသွယ်တွေက တစ်ဆင့် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
(ကိုး) နောက်နောင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ မပြောမဆို ‘၀’ပြည်နယ်ထဲကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုလာစိုက်ရင် အဖမ်းခံရဖို့က သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ပြည်မပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ပါတ်ီဝင် အချို့ဟာ ကားတွေပေါ်မှာ ပါတီအလံတွေထောင်ပြီး စစ်တွေကနေ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ဘက်ကို ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းအတိုင်း မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ ထွက်သွားကြတာ တွေ့လိုက်တော့ ဒုက္ခပါပဲ လို့ စိတ်ထဲက ရေရွတ်မိပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အဲသည်ကားတွေဟာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ကို အရောက်မှာ ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ ပုဏ္ဏာကျွန်းမြို့ထဲကို ချိုးဝင်သွားခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ချိုးမ၀င်ဘဲ အလံတ၀င့်ဝင့်နဲ့ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားရင် အနည်းနဲ့အများ ပြဿနာတက်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ပြည်မသားများရဲ့အသုံးချခံတွေအဖြစ် အထင်ခံရသူများအနေနဲ့ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းတလျှောက်ဆိုရင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့အထွက်ကနေ အမ်းမြို့နယ် ပဋိပက္ခတွေရှိနေရာ နေရာတွေအထိ တောက်လျှောက်မှာ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် လို့ တွေးဆမိပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စွပ်စွဲခံပြစ်မှုများအတွက် ICJ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တာကို ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ ထောက်ခံပွဲကျင်းပတာမျိုးဟာ ချင့်ချိန်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသတ်ဖြတ်ခံ စည်တောင်ရွာသားများအပါအ၀င် အနှိပ်စက်ခံ အသတ်ဖြတ်ခံ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ခမီးများ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်သင့်ပါတယ်။
(၁၀) ‘၀’ပြည်နယ်ထဲမှာ လွတ်လပ်စွာ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုစိုက်ထူပိုင်ခွင့် မရှိတာဟာ မတရားဘူးလို့ သွားပြီး အငြင်းပွားမနေတာဟာ ကာလံဒေသံကို နားလည်ရာရောက်တယ် လို့ ဆိုရမှာပါ။
၂၀၁၉-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်
ပူးတှဲပါ ဗီဒီယိုဖိုငျဟာ ဘူးသီးတောငျမွို့ကနေ မိုငျ (၂၀) မြှသာဝေးတဲ့ စညျတောငျကြေးရှာက မိသားစုတဈစု ဟာ မွနျမာ့တပျမတျောက ရှာကို ၀ိုငျးထားတဲ့အတှကျ မိမိတို့အိမျဝငျး မွကေငျြးမှာ ပုနျးအောငျနခေဲ့ရာမှာ တှငျးထဲအထိလာပဈလို့ သခေဲ့ကွရတဲ့ ဖွဈရပျဆိုးကို ရိုကျကူးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဘူးသီးတောငျဆိုတဲ့ မွို့ငယျကလေးက nld ပါတီဝငျ ကိုဘူနောငျ ချေါ ကိုရဲသိနျး ကို အအေကေ ဖမျးဆီးသှားပွီးနောကျပိုငျးမှာ တပျမတျောရဲ့ လကျနကျကွီးပဈခတျမှုကွောငျ့ ထိခိုကျသဆေုံးသှားခဲ့တယျ လို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျအနညျးငယျက အအေေ ကထုတျပွနျပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျရဲ့ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ မွနျမာပွညျမဘကျက ပွဈတငျရှုတျခမြှုတှေ အမွငျကှဲပွားမှုတှေ ရှိလာခဲ့ကွတယျ။
ICJ ကိုသှားမယျ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံပှဲလုပျမယျ့ ကိုရဲသိနျးကို အအေကေ ဖမျးဆီးတယျ ဆိုတဲ့အခါ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ တဈဦးတညျးသဘောထားအရဆိုရငျ ကိုရဲသိနျးအပျေါ ကြှနျတျော ဂရုဏာသကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ပတျပတျလညျက မိတျဆှတှေထေဲမှာ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးက ဘာမှ သဘောထားမှတျခကျြမပေးကွဘူး၊ ကနျြ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးက ဟာ . . . မိတျဆှကေလဲ အဲဒီလူက ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျ လို့ ပဈြပဈြနဈနဈ ပွောကွဆိုကွတာကို စိတျမကောငျးဖှယျရာ ကွားရပါတယျ။
ကိုဘူနောငျ (ချေါ) ကိုရဲသိနျး ကိစ်စမှာ ဗမာပွညျမဘကျကလူတှေ စဉျးစားပုံ ဝငျပွောကွပုံ နဲ့ ရခိုငျဘကျကလူတှေ စဉျးစားပုံ ဘာကွောငျ့/ဘယျလို ကှဲပွားခွားနားကွသလဲ ဆိုတာကို သကျရောကျဖှယျရှိတဲ့ “နောကျခံအကွောငျးအရာ” အခြို့ကို တငျပွလိုပါတယျ။ ဘာစကားကိုမှ မပွောခငျ ကနဦးပွောလိုတာကတော့ ကိုရဲသိနျးကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ သူ့မိသားစုအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရပါကွောငျး ပွောကွားလိုပါတယျ။
(တဈ) ရခိုငျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဦးရေ နှဈသောငျးဝနျးကငျြမြှသာ ရှိနိုငျတဲ့ ယနခေ့တျေ ဘူးသီးတောငျမွို့ငယျကလေးမှာ တဈဦးတညျးသော “မွငျသာနိုငျသော” မွို့ပျေါ nld ပါတီဝငျဟာ ကိုရဲသိနျး ဖွဈပါတယျ။ တဈမွို့လုံးမှာမှ nld ပါတီဝငျ တဈယောကျတညျးရှိတယျလို့ ပွောမယျ ဆိုရငျလညျး မှားနိုငျမယျ မထငျပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုရဲသိနျးဟာ မွို့ပျေါမှာ nld နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပှဲလေးဘာလေးလုပျစရာရှိရငျ နယျဘကျက မသိနားမလညျတဲ့ မွို့ပျေါမှာ ကွောငျအမျးအမျးဖွဈနတေတျတဲ့ မွို၊ ခမီး၊ ဒိုငျးနကျတှကေို လှမျးချေါ၊ သကျဆိုငျရာတိုငျးရငျးသား ဝတျစုံတှေ ဝတျစပွေီး အခမျးအနားတှလေုပျပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ထောကျခံပှဲတှေ လုပျပါတယျ။ မွို့ပျေါကလူတှကေတော့ ဘာမှမပွောဘဲ ခပျလှမျးလှမျးက ကွညျ့နတေတျပါတယျ။
(နှဈ) nld ပှဲတှမှော လာလာ လူဖွညျ့ပေးကွတဲ့ နယျဘကျက မွို၊ ခမီး၊ ဒိုငျးနကျ တှကေို ဘာမှ အပွဈတငျဖှယျရာမရှိပါ။ ခမီးအနညျးငယျကလှဲလို့ သူတို့ဟာ နိုငျငံရေးဆိုတာကို ကကွီး ခခှေး အဆငျ့တောငျမှ နားမလညျနိုငျကွပါ။ usdp ကိုထောကျခံကွရမယျ့ ကာလရောကျရငျ usdp ကို ထောကျခံကွရပါတယျ။ နားလညျသလောကျနဲ့ nld အားပေးကွရမယျ ဆိုရငျလညျး အားပေးလိုကျကွရတာပါပဲ။ နှဈဆယျအိမျစုကလေးတှအေားဖွငျ့ ပွနျ့ကွဲနထေိုငျကွတဲ့ ဒီရခိုငျမြိုးနှယျစုငယျတှဟော ပွီးခဲ့တဲ့ အနှဈသုံးဆယျလုံးလုံး နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှေ ngo တှရေဲ့ စနဈတကြ ခှဲခွားဆကျဆံမှုတှခေံခဲ့ကွရတယျ။ ဘေးနားက အိမျခွထေောငျခြီတဲ့ ဘင်ျဂါလီရှာကွီးတှကေို စားရရေိက်ခာမြိုးစုံ မပွတျမလပျစရေအောငျ နှဈပေါငျးသုံးဆယျ ထောကျပံ့နခေဲ့ကွစဉျမှာ – ‘ထောကျပံ့ရေးအစီအစဉျတှေ ထိရောကျမှုရှိအောငျ အိမျခွငေါးဆယျအောကျ ရှာသိမျတှကေို ထောကျပံ့ရေး ပရိုဂရမျထဲမှာ မထညျ့ဘူး’ ဆိုပွီး ပရိုဂရမျဆှဲထား ဆောငျရှကျလိုကျရုံမြှနဲ့ ပွနျ့ကွဲတညျရှိနတေဲ့ တိုငျးရငျးသားကြေးရှာသေးသေးလေးတှဟော အလိုလိုခနျြလှပျခံရပွီး ဆကျလကျငတျမှတျကွုံလှီလာခဲ့စဉျမှာ ဘေးနားက ဘင်ျဂါလီရှာတှေ အားကောငျးသထကျကောငျးလာခဲ့တယျ။ နောကျဆကျတှဲ စီးပှားရေး လူမှုရေးသကျရောကျမှုတှမြေားစှာ ရှိလာခဲ့တယျ။ ဘင်ျဂါလီတှဆေီမှာ အနိုငျကငျြ့ခံရတာမြားသထကျမြားလာတယျ။ တိုငျးရငျးသူလေးတှေ ဖားရှာ ငါးရှာ မြှဈရှာသှားစဉျ ဘင်ျဂါလီတှဆေီမှာ မုဒိမျးကငျြ့ခံရရငျ တိုငျကွားဝံ့ဖို့တောငျ မနညျးသတ်တိမှေးရတယျ။ ဒီလိုနောကျခံမှာ ရှိနတေဲ့ မြိုးနှယျစုငယျတှဟော usdp က အာဏာရှိတယျ လို့ ယူဆတဲ့ အခြိနျမှာ usdp ကို မဲပေးပါဆိုရငျ မဲပေးလိုကျကွတာပဲ၊ nld က အာဏာရှိတယျလို့ သိရတဲ့အခြိနျမှာ မွို့ပျေါမှာ nld ထောကျခံပှဲ လုပျမယျဆိုရငျလညျး သှား ထောကျခံပေးကွရတာပဲ။ သူတို့အတှကျ ရှေးခယျြနိုငျခှငျ့ အလှနျနညျးပါးပါတယျ။ ကမျးမမွငျလမျးမမွငျ ဘင်ျဂါလီပငျလယျကွောမှာ မြောပါနရေတဲ့ သူတို့အဖို့ ပွညျမ မငျးအစိုးရရဲ့ တိုကျရိုကျ လကျအောကျခံဖွဈတဲ့ နိုငျငံရေးအဖှဲ့အစညျးတဈရပျရပျဟာ သူတို့အဖို့ အသကျကယျကွိုးမြှငျ (life line) ဖွဈတယျ ခြိတျဆကျထားဖို့ လိုအပျတယျလို့ သူတို့ မှတျယူကွပါတယျ။
(သုံး) ဘူးသီးတောငျမွို့ကလေးမှာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး ခုနဈဆယျကြျောကအလှနျအရေးကွီးတဲ့ အဖွဈအပကျြ တဈခုဖွဈသှားခဲ့ဖူးတယျ။ အဲသညျအဖွဈအပကျြဟာ ယနအေ့ထိ ရခိုငျ၊ ဗမာ၊ ဘင်ျဂါလီ သုံးပှငျ့ဆိုငျ ထိတှမှေု့မှာ ရခိုငျတှဘေကျက အမွဲ စှဲမှတျယူထားကွတဲ့ သငျခနျးစာ တဈခုအဖွဈ ရှိနတေယျ။ အဲသညျအဖွဈအပကျြက ဘာလဲဆိုတော့ . . . ၁၉၄၂-ခုနှဈမှာ ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါနဲ့ ဘူးသီးတောငျနယျတဈခှငျလုံးမှာ ရခိုငျ ဗုဒ်ဓဘာသာတှေ တဈဦးတဈယောကျမှ မကနျြအောငျ ဘင်ျဂါလီတှလေကျခကျြနဲ့ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျခံလိုကျရတဲ့ ဖွဈရပျ ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျ အဖွဈဆိုးမှာ အရေးပါတဲ့ ဇာတျကောငျတဈကောငျကတော့ ရဲဘျောသုံးကြိပျဝငျ ဗိုလျရနျအောငျဖွဈပါတယျ။
ဗိုလျရနျအောငျ ဦးဆောငျတဲ့ ဘီအိုငျအတေပျတှေ စဈတှကေနေ ဘူးသီးတောငျကို တကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ဘူးသီးတောငျမွို့ဟာ ဘင်ျဂါလီတှရေဲ့ ပိတျဆို့တိုကျခိုကျမှုကို ခံနရေတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ တဈနယျလုံးက ထှကျပွေးလာရသူတှေ ဟာ ရသတေ့ောငျကို ထှကျပွေးဖို့ လကျလှမျးမမီတဲ့ ဒုက်ခသညျတှဟော ဘူးသီးတောငျမွို့မှာ လာခိုကွရတယျ။ နယျမွခေံပုလိပျ လကျတဈဆုပျစာ၊ ဗားမားဘျောလံတီယာ တပျဖှဲ့ဝငျ အနညျးငယျ၊ ကရငျတပျသားအနညျးငယျ၊ ရခိုငျလူငယျမြား နဲ့ ခုခံနလေို့ ဘူးသီးတောငျမွို့ အသကျရှငျနတော ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျအခြိနျမှာ ဗိုလျရနျအောငျတပျရောကျလာတယျ။ မွို့ကိုခုခံနသေူမြားဆီမှာ ရှိတဲ့ လကျနကျတှနေဲ့ တကှ လကျနကျတှအေကုနျလုံးကို ငွိမျးခမျြးရေးကို အကွောငျးပွပွီး ဗိုလျရနျအောငျတပျက သိမျးတယျ။ လကျနကျသိမျးပွီး ရကျအနညျးငယျ အကွာမှာ ဗိုလျရနျအောငျတပျဟာ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ ရယျမှနျးမသိ ဘူးသီးတောငျကနေ ဆုတျခှာပွီး စဈတှကေို မပွောမဆို တပျရုပျပွီးပွနျတယျ။ လကျနကျမဲ့ ဖွဈသှားတဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့လူထုဟာ ဗိုလျရနျအောငျ ဆုတျတဲ့နမှေ့ာပဲ ဘင်ျဂါလီတှလေကျခကျြနဲ့ အကုနျလုံး ခှေးသဝေကျသေ သတေယျ။ တဈယောကျမှ မကနျြဘူး။
(လေး) “ဘင်ျဂါလီတှရေဲ့ ရကျစကျမှု”၊ “ပွညျမသားမြားရဲ့လိမျညာမှု”၊ “ရခိုငျမြားအဖို့ ကိုယျကိုငျထားတဲ့ လကျနကျကမှ ကိုယျ့ကိုယျကို ကာကှယျနိုငျမှု” ဆိုတဲ့ သငျခနျးစာသုံးရပျကို အဲသညျ ၁၉၄၂-ခုနှဈ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျခံရမှုက ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျတှရေဲ့ စိတျသန်တာနျမှာ တပေါငျးတစညျးတညျး ခိုငျခိုငျမာမာ စှဲမှတျကနျြရဈစခေဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလ (၁၉) ရကျနကေ့ မနျအောငျမွို့မှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောတဲ့စကားဟာ ဒီ ၁၉၄၂ ဘူးသီးတောငျဖွဈရပျကို သိနသေူမြားအဖို့ကတော့ ကြှနျတျောတို့ နှလုံးသားမှာ အသအေခြာ မှတျသားထားတဲ့ သငျခနျးစာမြားရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျသာလြှငျ ဖွဈပါတယျ။ “လကျနကျအငျအားနဲ့ အပွောငျး အလဲလုပျဖို့ ကွိုးစားတယျဆိုတာ (ကို ကြှနျမအရငျကပွောဖူးပါတယျ။) ဉာဏျပညာအမွျောအမွငျ နညျးလို့လညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ သတ်တိနညျးလို့လညျးဖွဈနိုငျတယျ။ စတေနာ နညျးလို့ လညျးဖွဈနိုငျတယျ” ဆိုတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ စကားကိုကွားရတဲ့ အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ နှလုံးသှငျးဆငျခွငျသငျ့တာက ငါတို့ အလိမျအညာမမိဖို့လိုတယျ ဆိုတဲ့ ဆငျခွငျမှုဖွဈပါတယျ။
(ငါး) ဘူးသီးတောငျအပါအဝငျ ရခိုငျပွညျနယျမွို့နယျပေါငျးမြားစှာမှာ ဒီနှဈ လကျရှိ ပဋိပက်ခဖွဈပှားနတေဲ့ နရောတှမှော မွနျမာ့တပျမတျောဟာ လူ့အခှငျ့အရေးဖောကျဖကျြမှုတှေ နဲ့ ဂြီနီဗာကှနျဗနျးရှငျး (IHL) ဖောကျဖကျြမှုတှကေို ကြူးလှနျခဲ့ဖှယျရာရှိတယျလို့ အမြားက ဆငျခွငျသုံးသပျနကွေပါတယျ။ ဖွဈရပျမြားက ပျေါလှငျနပေမေယျ့ မွနျမာ့တပျမတျောက ပျေါပျေါထငျထငျ ဗွောငျငွငျးနတောဟာ လညျပငျးကို ကွိုးကှငျးအစှပျမခံလိုတဲ့ သဘောမြှသာဖွဈဖှယျရာရှိတယျ လို့နားလညျပေးလို့ ရပါတယျ။
ဒီနှဈအတှငျးမှာ ဥပဒပွေငျပ သတျဖွတျမှုတှေ ရာဂဏနျးဝနျးကငျြ ရှိပါပွီ။ မွောကျဦးမွို့နယျ လက်ကာကြေးရှာသားမြားကို ဖမျးဆီးစဈဆေးနခြေိနျမှာ ရကျပိုငျးအတှငျး ကနျြးမာရေးမကောငျးလို့ဆိုပွီး သသှေားရတာ၊ ဘာကွောငျ့သတောလဲ ဆိုတာကို ဆေးစာမပွနိုငျတာ၊ မိသားစုက အလောငျးတောငျ မတှလေို့ကျရတာ။ တပျမတျောက ဖမျးဆီးစဈဆေးနတေဲ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ကြောကျတနျးရှာသား ခုနဈဦးဟာ ပဈသတျခံရပွီးတဲ့အခါကမြှ သနေတျလုလို့ပါလို့ ပွောတာ။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ စညျတောငျကြေးရှာက မိသားစုတဈစုလုံးဟာ ပုနျးအောငျးနရောမွကေငျြးအထိ လာရောကျပဈသတျခွငျးခံရတာ . . . ၊ စသညျအားဖွငျ့ အဖွဈအပကျြပေါငျး မြားမွောငျလှပါတယျ။ ၂၀၁၉ မတျလ (၂၁) ရကျနေ့ ညနကေိုးနာရီခှဲလောကျမှာ မွနျမာစဈတပျက စညျတောငျကြေးရှာကို ၀ိုငျးထားခဲ့တယျ လို့ ဆိုတယျ။ (၂၂) ရကျနေ့ မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါ မွကေငျြးတူးပွီးဗုံးခိုနတေဲ့ မိသားစုတဈစုဟာ အကုနျလုံး ဗုံးကငျြးထဲမှာ သနေကွေပါပွီ။ အဲသညျညမှာပဲ အသကျကွီးရငျ့တဲ့ တုနျတုနျရိရိ အဖှားအိုတဈယောကျကိုလညျး ရှာထဲမှာ ပဈသတျခဲ့ကွသေးတယျ။
(ခွောကျ) နောကျတဈနမေ့နကျမှာ ကိုရဲသိနျးနထေိုငျရာ ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါက လှတျတျောအမတျတှနေဲ့တကှ ကွကျခွနေီအဖှဲ့ဝငျအခြို့နဲ့ ကွကျခွနေီအလံကို လှငျ့ထူပွီး စညျတောငျရှာကို လိုကျသှားကွပါတယျ။ လိုကျသှားတဲ့အဖှဲ့ ရောကျသှားသညျအထိ မွနျမာ့တပျမတျောသားတှဟော ရှာကို ၀ိုငျးပွီး ပဈနကွေတုနျးပဲ ရှိသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အမတျ နဲ့ ကွကျခွနေီအလံကို မွငျလို့ အသာလေးနောကျဆုတျသှားကွတာလို့ ဆိုပါတယျ။
(ခုနဈ) စညျတောငျမှာ သတျဖွတျခံခဲ့ရသူတှေ ရဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ အပါအဝငျ ရှာသားတှအေကုနျလုံး ဘူးသီးတောငျမွို့ပျေါကို ပွောငျးရှခေို့လှုံကွရပါတယျ။ သတျဖွတျခံခဲ့သူတှအေတှကျ ဘူးသီးတောငျတဈမွို့လုံး ပူဆှေးသောကရောကျကွရပါတယျ။ ပူဆှေးခဲ့ကွသူတှထေဲမှာ ကိုရဲသိနျးတော့ ပါမယျမထငျပါဘူး။ အဲသညျအခြိနျကတညျးက မွနျမာတပျမတျောကို ICC မှာ တိုငျတမျးဖို့ အခကျြအလကျတှေ စုစညျးဖို့သငျ့တယျ လို့ ပွောကွဆိုကွတာတှေ မြားသထကျမြားလာပါတယျ။
(ရှဈ) ရခိုငျက နာမညျကွီးခေါငျးဆောငျအခြို့ ရဲ့နောကျမှာ လူညံ့လူဖငျြး လူလိမျလူကောကျအခြို့ လာလာ နရောယူကွတာကို တှရေ့သလို nld ရဲ့ ထီးရိပျအောကျမှာ အမှိုကျသရိုကျတှေ အမြားအပွားရှိနနေိုငျပါတယျ။
စဈထောကျလှမျးတှေ တနျခိုးထှားစဉျကာလမှာ ဦးရဲသိနျး (ချေါ) ကိုဘူနောငျဟာ စဈထောကျလှမျးရေး အခြို့နဲ့ ပေါငျးဖကျပွီး ဘူးသီးတောငျမွို့ ကွကျကိုယျစားလှယျ လုပျခဲ့ခွငျးရှိမရှိ စုံစမျးကွညျ့ဖို့ကောငျးပါတယျ။ အဲသညျခတျေတုနျးက နယျမွတေဈခုခုမှာ ကုနျပစ်စညျးအမြိုးအမယျတဈခုကို တဈဦးတညျးပိုငျ ဝယျယူရောငျးခခြှငျ့ကို “ကိုယျစားလှယျ” လို့ ချေါကွပါတယျ။ အဲသလို “ကိုယျစားလှယျ” monopoly လုပျခှငျ့ကို ထောကျလှမျးရေးတှဆေီက ရတဲ့သူတှဟော ကွိုကျစြေးခဝြယျ ကွိုကျစြေးတငျရောငျးနဲ့ အငျမတနျ အလုပျဖွဈလှပါတယျ။ အဲသလိုလုပျစားဖို့ကို ဘင်ျဂါလီတှကေ စဈထောကျလှမျးရေးတှကေို သငျပေးကွတာဖွဈပွီး ဘင်ျဂါလီက ရှမေ့ထှကျခငျြရငျ ရခိုငျတဈယောကျယောကျကို နာမညျခံခိုငျးထားတတျပါတယျ။ ဒီစနဈဟာ သံတှဲတို့အထိမရောကျပမေယျ့ ဘူးသီးတောငျ မောငျတောကနေ စဈတှအေထိ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ရောကျခဲ့ပါတယျ။
အဖမျးမခံရခငျတဈရကျက ကိုဘူနောငျဟာ စဈတှမွေို့ကို ရောကျလာခဲ့သေးတယျ လို့ သိရတယျ။ အုတျဖုတျ လုပျငနျးလုပျလိုသူ တဈယောကျအတှကျ လိုအပျတာလေးတှကေို သူ့ရဲ့ nld အဆကျအသှယျတှကေ တဈဆငျ့ အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးဖို့ဖွဈတယျ လို့ဆိုပါတယျ။
(ကိုး) နောကျနောငျတဈခြိနျခြိနျမှာတော့ မပွောတတျဘူး၊ ဒီကနေ့ ဒီအခြိနျမှာ မပွောမဆို ‘၀’ပွညျနယျထဲကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရုပျထုလာစိုကျရငျ အဖမျးခံရဖို့က သခြောသလောကျ ရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈလလောကျက ပွညျမပါတီကွီးတဈခုရဲ့ ပါတျီဝငျ အခြို့ဟာ ကားတှပေျေါမှာ ပါတီအလံတှထေောငျပွီး စဈတှကေနေ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ဘကျကို ရနျကုနျ-စဈတှလေမျးအတိုငျး မွောကျကွှမွောကျကွှနဲ့ ထှကျသှားကွတာ တှလေို့ကျတော့ ဒုက်ခပါပဲ လို့ စိတျထဲက ရရှေတျမိပါတယျ။ ကံကောငျးခငျြတော့ အဲသညျကားတှဟော ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ကို အရောကျမှာ ရှဆေ့ကျမသှားဘဲ ပုဏ်ဏာကြှနျးမွို့ထဲကို ခြိုးဝငျသှားခဲ့တယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ ခြိုးမဝငျဘဲ အလံတဝငျ့ဝငျ့နဲ့ ရနျကုနျ-စဈတှလေမျးအတိုငျး ရှဆေ့ကျသှားရငျ အနညျးနဲ့အမြား ပွဿနာတကျနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။ ပွညျမသားမြားရဲ့အသုံးခခြံတှအေဖွဈ အထငျခံရသူမြားအနနေဲ့ ရနျကုနျ-စဈတှလေမျးတလြှောကျဆိုရငျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့အထှကျကနေ အမျးမွို့နယျ ပဋိပက်ခတှရှေိနရော နရောတှအေထိ တောကျလြှောကျမှာ အနအေထိုငျဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ လို့ တှေးဆမိပါတယျ။ ထိုနညျးတူစှာ မွနျမာစဈတပျရဲ့ စှပျစှဲခံပွဈမှုမြားအတှကျ ICJ ကို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သှားရောကျတာကို ဘူးသီးတောငျမွို့မှာ ထောကျခံပှဲကငျြးပတာမြိုးဟာ ခငျြ့ခြိနျလုပျဆောငျသငျ့တဲ့ အလုပျဖွဈပါတယျ။ အသတျဖွတျခံ စညျတောငျရှာသားမြားအပါအဝငျ အနှိပျစကျခံ အသတျဖွတျခံ ရခိုငျ၊ ခငျြး၊ ခမီးမြား အားလုံးရဲ့ မကျြနှာကို ထောကျသငျ့ပါတယျ။
(၁၀) ‘၀’ပွညျနယျထဲမှာ လှတျလပျစှာ ဗိုလျခြုပျရုပျထုစိုကျထူပိုငျခှငျ့ မရှိတာဟာ မတရားဘူးလို့ သှားပွီး အငွငျးပှားမနတောဟာ ကာလံဒသေံကို နားလညျရာရောကျတယျ လို့ ဆိုရမှာပါ။
၂၀၁၉-ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၂၇) ရကျ
Previous `ရခိုငျပွညျနယျ´ဟူသော အိုငျဒီယာ
Next ၂၀၂၀ နှဈသဈကူး စကား